Xubno ka qeyb-galaya furitaanka Kal-fadhiga 7aad ee Baarlamaanka oo Muqdisho kusoo wajahan – Radio Baidoa
Xubno ka qeyb-galaya furitaanka Kal-fadhiga 7aad ee Baarlamaanka oo Muqdisho kusoo wajahan
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa kasoo ambabaxay Magaalada Dhuusamareeb, iyaga oo kusoo wajahan Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Barlamanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa u jeedka uu u imaanayo Muqdisho waxaa lagu sheegay in uu ka qayb galayo furitaanka Kalfadhiga 7aad ee Barlamaanka Fadaralka Somalia oo 6 bishaan ka furmaya Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne kuxigeenka dowlad Goboleedka Galmudug iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb waxaa ay kasoo sagootiyeen Wafdiga Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo Mas’uuliyin kale oo ka socota dowlad Goboleedyada ayaa waxaa la filayaa inay khudbad ka jeediyaan furitaanka kulanka Baarlamaanka Somaaliya.
27-ka Bishaan ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo Yareey oo lag sugayo in Baarlamaanka ay ka dhageystaan nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa iyo waqtiga la qabanayo doorashada.
DalkaTalyaaniga oo dacwad kusoo oogay dad loo heysto Al-Shabaabnimo